ကိုအောင်မှိုင်း - ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ - MoeMaKa Media
Home / Coup / Currents / Ko Aung Hmine / Opinion / ကိုအောင်မှိုင်း - ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ
(မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၂၁
ကျနော်တို့ဗမာတပြည်လုံး ကနေ့မေးနေကြတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် မြန်မာနိုင်ငံတနံတလျား တိုင်းရင်းသားလူမျိူးပေါင်းစုံက ဖက်ဆစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကို ဆန့်ကျင် ခုံခံနေ ကြချိန်မှာ ဒီမေးခွန်းကတော့ ကနေ့အခြေအနေအားလုံးအတွက် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ တိုက်ပွဲဝင်ရင်းကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ dead body အလောင်းတွေဟာ ကနေ့ဆိုပဲခူး မြို့မှာ တောင် လိုပုံခဲ့ရပါပြီ။ပက်ပက်စက်စက် ရက်ရက်စက်စက်လူမဆန်အောင် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် လူတွေလို့ တောင်ပြောရခက်တဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆိုသူတွေဟာ လူထက်အသိဉာဏ်တဆင့်နိမ့်တဲ့ သတ္တဝါတွေလို့တောင် ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကလဲ ဒီလိုဘဲပြောကြရေးကြတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတိရစ္ဆာန်အဆင့်လက်နက်ကိုင်တွေကို ကုလသမဂ္ဂမပြောနဲ့ ဘယ်ဘုရားမှနားချလို့ရမှာ မဟုတ်တာသေ ချာပါတယ်။ ပိုဆိုးဝါးလာတာကတော့ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ကိုယ်ရကိုယ်ယူစနစ်ကျင့်သုံးဘို့ စစ်တပ်ကို စေခိုင်း လိုက်တာကတော့ အလွန်ကိုလူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြိးပါဘဲ။ ကိုယ်ရကိုယ်ယူစနစ် ဖြစ်လို့ စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဟာ လက်ရဲဇက်ရဲသတ်ကြဖြတ်ကြတယ်။ လုယက်ဓားပြတိုက်ကြတယ်။ လူတွေ ရုပ် ဝတ္တုပစ္စည်းတွေကို ပြန်ပေးဆွဲ ကြတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကမ်းကုန်အောင် လူမဆန်မှုတွေ လုပ်နေ ကြတာကတော့ လူမြင်သူမြင်မကောင်းရုံ မကတော့အောင် စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာစရာတွေဖြစ်နေတော့တာပါ။ သတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ စစ်မြေပြင် သုံးစစ်လက်နက်ပစ္စည်း အပြည့်အစုံနဲ့ဖြစ်ပြီး ခုခံရတဲ့သူတွေမှာ တုတ်ဓားလက်နက်စတဲ့ ရရာလက်နက်နဲ့ခုခံ နေရတာဖြစ်လို့ တနေ့ထဲမှာ ရာချီတဲ့လူတွေကို မြို့တမြို့ထဲမှာ တချိန်ထဲပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အထိ ၂၁ ရာစု ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှု အထွဋ်အထိပ်လို့ သမိုင်းတွင်ရစ်တော့မှာပါ။
စစ်တပ်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး တရက်ထဲ လူ ၁၀၀ ကျော်ပစ်သတ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ နောက်တနေ့မှာ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မှုမရှိဘဲ သန်းချီပြီလမ်းမတွေပေါ်ထွက်လာ ခဲ့တယ်။ သေနတ်တွေဗုံး တွေကိုအံတုရင်း ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေတဲ့ကြားက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြ တယ်။ နေ့စဉ်အသတ်ဖြတ်အရိုက်နှက် အဖမ်းဆီးတွေကိုခံရင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်း ရင်ကော့အသေခံ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာ တကမ္ဘာလုံးမှာလူစိတ်ရှိသူတွေ အားလုံးလိုလို မျက်ရည်မိုးတွေရွာခဲ့ကြတယ်။ ကလေး မြို့အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အခါ မြောက်ဒဂုံသားတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ကြားက “ကလေးမြို့ရေ အားတင်းထား မ/ဒဂုံ” လို့အား ပေးကြတယ်။ အဲလိုဘဲ ပဲခူးမြို့ မှာလူပေါင်း၈၀ကျော်ကို တရက်ထဲပစ်သတ်ခဲ့တယ်။ ပဲခူးမြို့မှာ လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆွဲသတ်ခဲ့တယ်။ 40mm ရိုင်ဖယ်တပ် စစ်မြေ ပြင်သုံး ဗုံးသီးသေနတ်တွေ အခိုင် အမာသုံးခဲ့တာတွေကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒီလိုလူမဆန်မှုတွေကို တွေ့ ရတဲ့အခါ အသတ်အဖြတ်အများအပြား ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးမြို့ကပြည်သူတွေက ဆီမီးတွေပူဇော်ပြီး “ပဲခူးမြို့ရေ အားတင်းထား ကလေးမြို့” လို့အားပေးခဲ့တာမြင်ရတော့ ရင်နဲ့အမျှကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖြစ်မိတယ်။
မြန်မာ့အရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသီးသန့်အစည်းအဝေး Arria Formula Meeting ဧပြီလ ၉ ရက် နေ့ နံနက် ၁၀နာရီ EST မှလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့ တရုတ်အစိုးရကိုချန်ထားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ က CRPH ကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးကို တက်ရောက်စကားပြောခွင့်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ထားတဲ့ စာနာထောက်ခံမှုဟာ အင်မတန် အားရကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတခုလုံးက တရားမျှတမှုအတွက် စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက် မှုတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ စာထုတ်တာလောက်နဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လက်တုံ့ပြန်ဖို့ စကားသံတွေဟာ အစည်းအဝေးတခုလုံးလွှမ်းမိုးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်ဇင်မာအောင် ယာယီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ဦးစိုင်းစမ်ခမ်း နယ်သာလန်နိုင်ငံပညာရှင်၊ ဦးကျော် မိုးထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသံ အမတ်ကြီးစတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၃ ဦးကို အစည်းအဝေးမှာ စကားပြောခွင့်ပေးခဲ့တာဟာ တရုတ်အစိုးရ ကနေ့လုပ်နေတဲ့ ကပ်ဖဲ့ယပ်ဖဲ့လုပ်မှုတွေကို ဗြောင်ဆန့်ကျင် လိုက်တာလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူခြားဆုံး စကားကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအမျိုးသမီးသံတမန် ခရစ္စတင်း ရှရနာဘာဂျီနာ (Christine Schraner Burgener)ကဗြောင်ပြောခဲ့တာပါ။ “မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သံခင်းတမန်ခင်းဆွေးနွေးမှုကတော့ အဆုံး သတ်သွားပြီ” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကနေ့တရုတ်ပြည်အစိုးရရဲ့ အစီအမံတခုဖြစ်တဲ့ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ အာဆီယံအစည်းအဝေးဆိုတာ တကယ်တော့ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကို အချိန်ပေးဖို့ဆိုတာထက်မပိုဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထက်သန်မှုတွေကို အချိန်ဆွဲပြီး ပြည်တွင်းမှာလဲ ပြည်သူလူထုကို အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့ဆိုတာထက်မပိုပါဘူး။ တကယ်တော့ အာစီယံဆိုတာ ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ key player သော့ချက်ကျတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အာစီယံအစည်းအဝေးကထွက်လာမဲ့ ကြေညာချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အခုထဲက ရေးပြီးလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရဟာ တရုတ်ပြည်ထဲမှာလဲ မြန်မာ နိုင်ငံနွေဦးတော်လှန်ရေးကို ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်အောင် အမျိူးမျိူးလိမ် လည်ပြီး တရုတ်ပြည်သူလူထုကို မီဒီယာတွေကတဆင့်လိမ်လည်မှုတွေလုပ်နေကြောင်း သတင်းတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ တရုတ်ပြည်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှားယွင်းဖေါက်ပြန်တဲ့ပေါ်လစီတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေရပ်တန်းက ရပ်ဘို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
အလောင်းဖျောက်မီးရှို့တာတွေ အရှင်လတ်လတ်မန္တလေးမြို့မှာမီးရှို့သတ်တာတွေအပါအဝင် အသတ်လဲခံရတယ်။အလောင်းတောင်ပြန်မရလို့ အလောင်းမရှိဘဲ သရဏဂုံတင်လိုက်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မူဆလင်ဘာ သာဝင်တွေ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက် ဘာသာတရားအရ စော်ကားမှုတွေလို့ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိူးတွေကို လျစ်လျူရှုခံနေရတာ နေ့တဓူဝဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဘယ်တရားရုံးကိုတိုင်ရမလဲဆိုတာထက် ကိုယ့်ကိုမထင်ရင်မထင်သလို အဖမ်းမခံရအောင် အရိုက်အနှက်မခံရအောင် သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်မခံရ အောင် ကြိုးစားနေကြရတာပါ။ ဒီလိုလုပ်ကြတာ ကို ဘယ်သူမှမသိဘူး၊ သိလဲဂရုမစိုက်ဘူး သေနတ်ရှိရင် ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတဲ့ခေတ်ကတော့ ၂၁ ရာစုမှာ အမှန်တကယ်ကုန် ဆုံးသွားပြီဆိုတာကို အကြမ်းဖက် စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့ အပေါင်းပါတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားပဲပြောချင်ပါတယ်။
အစည်းအဝေးလဲပြီးရော နောက်တနေ့မှာ ဥရောပတိုက်စကင်ဒီနေဗီးယား ငါးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ အိုက်စလန်၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွေက ပူးတွဲကြေငြာချက်တခုထုတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေက ကာကွယ်ဘို့နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ (R2P) ကိုရည်ညွန်းတာဖြစ်တယ်။
၂။ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြုဘို့ကြိုးစားမှုအားလုံးကို လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်။ CRPH ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်။။
၃။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ခြင်းရပ်ရန်။ အရေးပေါ်အခြေအနေကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းရန်။
၄။ ရွေးကောက်ခံအစိုးရကို အာဏာပြန်လွဲရန်။
၅။ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းတရားစွဲသူများအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ပြန်လွတ်ရန်။
ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းအရအတော်ပြင်းထန်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံတွေ က ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ R2P ဆုံးဖြတ်ရင် ကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘဲ ထောက်ခံမှာ သေချာနေတာပါ။
ကျနော်ဒီအချက်အလက်တွေရေးသားဖေါ်ပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကနေ့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ မေး ခွန်းကိုဖြေဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေက ပါသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သွေးသားတွေဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှစ်မများအပါအဝင် လူပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရဲ့ အသက်တွေဟာ ပက်ပက်စက်စက် ယုတ် ယုတ်မာမာ အသတ်ခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ကလေး ၅၀နီးပါးဟာလဲ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ခြေပြတ် လက်ပြတ် မျက်စေကန်း နားကန်းစတဲ့ နှိပ်စက်ခံရလို့ ဒုက္ခိတဖြစ်သွားခဲ့ရသူတွေလဲ ထောင်အချိူ့ရှိခဲ့ ရပါပြီ။ ထောင်တွေ ထဲမှာလဲ လူ ၃ ထောင်ကျော် ၄ ထောင်လောက် မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသလို မတရား ဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဘို့ အမိန့်တွေထုတ်ခံရသူတွေလဲ အများအပြားရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ကနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ဘယ်လိုမှစေ့စပ်ပြေငြိမ်းလို့မရနိုင်တော့ပါ။ ဒီလိုပြောရတာက သေဆုံးသွားခဲ့ ကြတဲ့ တမလွန်ကအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ သွေးစွန်း သွားခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့လူထုက တရားသဖြင့် လက်နက်မဲ့ခုခံခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကနေ့ ကျနော်တို့ တိုက်ပွဲတွေမှာ အကျအဆုံးများတဲ့အခါ တွေဝေမှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ကျနော်တို့ နိုင်ကို နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ သန္နိဋ္ဌာန်တွေရှိမယ်ဆိုရင် နည်းနာတွေ ရလာမှာ အသေအချာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တော်လှန်ရေးတွေမှာလဲ အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေကို ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့တောင့်ခံ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အောင်ပွဲတွေရလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြည် သူ ၅၃ သန်းက နိုင်ကိုနိုင်မှာသေချာပါတယ်။
CNN သတင်းထောက်ချူပ် Clarissa Ward ပြောသလိုဘဲ “ဒီလောက်နိမ့်ကျတဲ့ ဉာဏ်ရည်မျိူး ကျွန်မ မတွေ့ဘူးတာ နှစ်အတော်ကြာပြီ။ (Itsalevel of stupid , I’ve not seen foralong time.)” ကနေ့ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေကြရသူတွေဟာ လူသားတယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဘို့ရာမှာ လူစဉ်မမီတဲ့ဉာဏ်ရည်မျိူးတွေရှိနေ တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလို လူအန္တတွေပါ။ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့မျိူးဆက်တွေအတွက် တိုက်ပွဲတွေဆက် ဝင်ကြရပါမယ်။ သတိ ဝိရိယ ဉာဏ်ပညာတွေကို တိုက်ပွဲတွေမှာ သုံးကြရပါမယ်။ ကျနော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ ခိုင်မာတဲ့ယုံ ကြည်ချက် သန္နိဋ္ဌာန် နဲ့ ဒီပွဲကို အနိုင်တိုက်ကြမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒေါ်ဇင်မာအောင် (ခေတ္တ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး)ရဲ့ စကားနဲ့ဘဲနိဂုံးချူပ်ပါရစေ။
"People are ready to pay any cost to get back our own rights."
"ကျနော်တို့ လူထုဟာ မိမိတို့ မူလရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို ပြန်လည်ရရှိဖို့အရေး ဘာမဆို ပေးဆပ် ဖို့ထိ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပါပြီ။"
ဧပြီလ ၁၁ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်
Photo - YBS ၈၉ ကား ၅ စီး မီးလောင်။ ဧပြီ ၁၂ ရက် မနက် ၅ နာရီလောက် ကြည့်မြင်တိုင်၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်း၊(၈၉)ဂိတ်နား ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေလို့ပြောပါတယ်။
ကိုအောင်မှိုင်း - ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ Reviewed by MoeMaKa on 10:13 PM Rating: 5